NYOCHA KỌMPUTA: NHAZI, KAADỊ VIDIYO, HDD, RAM. MMEMME KACHASỊ ELU - DISK - 2019
Nyocha kọmputa: nhazi, kaadị vidiyo, HDD, RAM. Mmemme kachasị elu
Na otu n'ime isiokwu ndị mbụ, anyị nyere ngwá ọrụ ndị ga-enyere aka nweta ozi gbasara ngwaike na arụnyere na kọmputa gị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ma chọpụta ihe ndabere nke ngwaọrụ? Iji mee nke a, enwere ụlọ ọrụ pụrụ iche nke na-anwale kọmputa gị n'oge na-adịghị anya, dịka ọmụmaatụ, onye nhazi, wee gosi gị akụkọ na ihe ngosi n'ezie (ule maka RAM). N'ebe a, anyị ga-ekwurịta banyere ọrụ ndị a na post a.
Ya mere ... ka anyi malite.
1. Kaadị vidiyo
3. Ram (Ram)
4. Diski ike (HDD)
5. Nyochaa (maka pixels agbajiri)
6. Nyocha kọmputa zuru oke
Iji nyochaa kaadị vidiyo ahụ, m ga-agbachitere ịmepụta usoro free -Furmark (http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/). Ọ na-akwado ihe niile Windows OS nke oge a: Xp, Vista, 7. Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịtụle arụmọrụ nke kaadị vidiyo gị.
Mgbe ị wụnye usoro ihe omume ahụ, anyị ga-ahụ windo na-esonụ:
Ka ịlele ozi gbasara ọnụọgụ vidiyo, ị nwere ike pịa bọtịnụ CPU-Z. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ihe nlereanya nke kaadị vidiyo ahụ, ụbọchị ịhapụ ya, BIOS version, DirectX, ebe nchekwa, usoro ihe nhazi, wdg.
Ọzọ bụ "Sensọ" taabụ: ọ na-egosi ibu na ngwaọrụ na oge a kara aka. + okpomọkụ kpo oku (ọ dị mkpa). Site n'ụzọ, tabita a enweghị ike imechi n'oge ule.
Ịmalite nyochaEnwere m kaadị vidiyo, pịa bọtịnụ "Ọkụ na ule" na windo ahụ, wee pịa bọtịnụ "GO".
Tupu ị ga-apụta ụdị "bagel" ... Ugbu a, jiri nwayọọ chere ihe dị ka nkeji iri na ise: n'oge a, kaadị vidiyo gị ga-adị!
Ọ bụrụ na mgbe 15 min. Kọmputa gị amaliteghachighị, egosighi - i nwere ike iche na kaadị vidiyo gị gafere ule ahụ.
Ọ dịkwa mkpa ịṅa ntị na ọnọdụ okpomọkụ nke ihe nkiri vidiyo vidiyo (ị nwere ike ịhụ na taabụ Sensọ, lee n'elu). Na okpomọkụ agaghị ebili n'elu 80 gr. Celsius Ọ bụrụ na ọ dị elu - enwere ihe ize ndụ na kaadị vidiyo ahụ nwere ike ịmalite ịkpa àgwà n'ụzọ doro anya. Enwere m ike ịgụ isiokwu banyere ịbelata okpomọkụ nke kọmputa ahụ.
Ezi uru maka ule nhazi ahụ bụ 7Byte Hot CPU Tester (ị nwere ike ibudata ya na saịtị: http://www.7byte.com/index.php?page=hotcpu).
Mgbe mbụ ị na-ebido ọrụ ahụ, ị ​​ga-ahụ windo na-esonụ.
Iji malite ule, ị nwere ike pịa ozugbo Gbaa ule. Site n'ụzọ, tupu nke a, ọ ka mma ịmechi mmemme niile, egwuregwu, na ihe ndị ọzọ, ebe ọ bụ na mgbe ị na-anwale ihe nhazi gị ga-ebugo ma ngwa niile ga-amalite ịmalitelata ngwa ngwa.
Mgbe a nwalere gị, a ga-enye gị akụkọ, nke, site n'ụzọ, nwere ike bipụta ya.
N'ọtụtụ ọnọdụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-anwale kọmputa ọhụrụ, otu eziokwu - na ọ dịghị adaba n'oge ule - ga-ezu iji chọpụta ihe nhazi ahụ dịka ọ dị maka ọrụ.
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka ule RAM bụ Memtest + 86. Anyị na-ekwu banyere ya n'ụzọ zuru ezu na post gbasara "nyocha ugbo".
N'ikpeazụ, usoro dị ka nke a:
1. Download Memtest + 86 uru.
2. Mepụta CD / DVD ma ọ bụ USB flash drive.
3. Bido na ya ma lelee ebe nchekwa. Ule a ga - adịgide ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụrụ na a chọpụtaghị njehie mgbe ọtụtụ agba ọsọ, mgbe ahụ, RAM na - arụ ọrụ dika ọ tụrụ anya ya.
Enwere ọtụtụ ihe eji eme ihe maka ịnwale draịva siri ike. Na post a, m ga-achọ ka ọ bụrụ nke kachasị ewu ewu, ma kpamkpam nke Russia ma dị nnọọ mma!
Nzute -PC3000DiskAnalyzer - freeware freeware uru ịlele arụmọrụ nke draịva ike (i nwere ike ibudata na saịtị: http://www.softportal.com/software-25384-pc-3000-diskanalyzer.html).
Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ ahụ na-akwado mgbasa ozi kachasị egwu, gụnyere: HDD, SATA, SCSI, SSD, USB HDD / Flash.
Mgbe emechara, Uru na-eme ka ị họrọ disk diski nke ị ga-arụ ọrụ.
Na-esote, windo mmemme kachasị na-egosi. Iji malite ule, pịa bọtịnụ F9 ma ọ bụ "nyocha / mmalite".
Mgbe ahụ, a ga-enye gị otu nhọrọ nhọrọ:
M n'onwe m họọrọ "nkwenye", nke a bụ iji chọpụta ọsọ nke diski ike, iji lelee ndị, ndị na-aza ngwa ngwa, na ndị na-enyerịrị njehie.
A na-ahụ ya n'ụzọ doro anya na eserese dị otú ahụ na e nweghi ihe ọjọọ, e nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-anabata nduhie (nke a adịghị njọ, ọbụna na diski ọhụrụ enwere ihe dị otú ahụ).
Maka foto dị na nyocha ahụ nke dị elu ma na-eziga ya zuru - ọ gaghị enwe pixels nwụrụ anwụ.
Broken - nke a pụtara na a gaghi egosipụta ụdị agba ọ bụla ugbu a. Ee N'ezie, were echiche nke mgbagwoju anya nke e mepụtara otu ihe nke foto ahụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, obere mkpụrụedemede nwụrụ - nke ka mma.
Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịhụ ha na foto ma ọ bụ ọzọ, ya bụ. ịkwesịrị ịgbanwe agba na nyocha ma hụ: ọ bụrụ na e nwere pixels agbajiri, ị ga-achọpụta ha mgbe ịmalite na-agbanwe agba.
Ọ ka mma ime usoro dị otú ahụ site n'enyemaka nke ụlọ ọrụ pụrụ iche. Dị ka ihe atụ, ọ dị ezigbo mma IsMyLcdOK (ị nwere ike ibudata ya ebe a (maka usoro 32 na 64) http://www.softportal.com/software-24037-ismylcdok.html).
Ịkwesighi ịwụnye ya, ọ na-arụ ọrụ ozugbo ịmechara.
Pịa ọnụ ọgụgụ dị na keyboard na ntinye na nyocha ahụ ga-ese na agba dị iche iche. Lelee ihe ndị dị na nyocha ahụ anya, ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Ọ bụrụ na mgbe ịnwale ahụ ịchọtaghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ, ịnwere ike ịzụta nyochaa n'enweghị nsogbu! Ọfọn, ma ọ bụ echegbula onwe gị banyere ugbua zụrụ.
Ọ gaghị ekwe omume ịghara ịkpọ ọrụ ọzọ nke nwere ike ịnwale ọtụtụ kọmputa gị n'otu oge.
SiSoftware Sandra Lite (ibudata njikọ: http://www.softportal.com/software-223-sisoftware-sandra-lite.html)
A na-enye n'efu na-enye gị ọtụtụ narị afọ na ozi gbasara usoro gị, ga-enwe ike inyocha ngwaọrụ iri na abụọ (nke anyị chọrọ).
Iji malite ule, gaa na "ngwaọrụ" taabụ ma na-agba ọsọ "nyocha nkwụsị".
Lelee igbe nlele ndị na-abụghị ihe achọrọ. Site n'ụzọ, ị nwere ike ịchọpụta otu ụyọkọ ihe: ihe nhazi, ngwa ikuku, ihe ngosi kọmputa, nyefe ọsọ ọsọ na ekwentị / PDA, RAM, wdg. Na, maka otu nhazi ahụ, nyocha dị iche iche dị iri na abụọ, sitere na arụmọrụ na-emepụta ihe na ntinye nyocha ...
Mgbe nhazi ntọala site na ntinye na ịhọrọ ebe ị ga-azọpụta faịlụ akụkọ ikpe, usoro ahụ ga-amalite ịrụ ọrụ.
Nke a mezue ule nke kọmputa ahụ. Enwere m olileanya na ndụmọdụ na ọrụ ndị dị na isiokwu a ga-aba uru maka gị. Site n'ụzọ, olee otu ị na-anwale PC gị?